ikhaya » Okufumaneka » I-#NABShow 2017: Umenzi wezinto ezibonakalayo: Iifoto ezimnandi ziyakhawuleza!
I-#NABShow 2017: Umenzi wezinto ezibonakalayo: Iifoto ezimnandi ziyakhawuleza!
Ihlabathi lenkoqobo yokuvelisa ngokuqinisekileyo lalimele kule minyaka #NABSikhombisa 2017. Izithombe ezimnandi "Beziswa etafileni" ii-VR zakutsha kunye ne-360 izixazululo zevidiyo ezabonakaliswa kwiimbumba ezininzi kumgangatho wendibano, oko kukuthi AXA 360 kwaye i Sense 9 Inkqubo yekhamera yekhamera! Lezi ziqwenga ezintle zobunjineli bokusebenza ngobunjineli kunye nokusebenza ngokukrakra kunobungqina bokuba iifoto ezinobungqina bobuvulindlela bokwenene kule ndawo yobungcali!
Ukuphumelela kwe Sense 9 kwaye i ZeAXA Kukuba zenzelwe iikhamera ze-cinematic ukudala umxholo we-VR / AR / 360 usebenzisa i-industry picture yeshukumisi abaqhelekileyo ukuba basebenzise. Ukuthinjwa kwe-360 esondeleyo esondeleyo ngokuqinisekileyo kuyona nto ibhetele kwimarike, ithonyelwe yendalo kunye nemithetho ye-physics kunye nejometri iinjineli zoyilo kwi-Radiant Images zibugcisa obudala!
"Bobabini i-9 ne-AXA ye-Sense yenziwa ngokukhangela kwethu kunye nokuphikelela ekufumaneni izisombululo ezithintela izithintelo kunye nokunciphisa abenzi befilimu," Uthi uRoant Co-founder uMichael Mansouri. "I-Radiant ayinakuvuyisa ngakumbi ngeendlela ezimbini zekhamera, eziza kuqhubeka zolulela amathuba okudala okwakhiwa kwezinto ze-360. Sibheke phambili ukuwabelana ngezixhobo ezintsha kwi-NAB. "
The Inkqubo yekhamera yeAXA 360 Ufika ngobukhulu obuhlukeneyo obuthathu, kwaye uhlala kwiindidi ezintle zeekhamera isuka e ARRI Alexa Mini kwaye BOMVU, Kwi-compact Sony UMC-s3C kwaye i Blackmagic Mirco, Uze ufike kwi GoPro! I-AXA 360 izalisekile ngeempawu ezinjengokuthi: i-realtime time stitch stitch, ukusabalalisa amandla, ukuchaneka kwikhowudi yesikhokelo kunye nokuvumelanisa i-gen-lock, kwaye kuza kuza kugqibeleleyo ngezombululo zogunyaziso ezidibanisiweyo, ukujonga ividiyo kunye nokuvumelanisa. Kwakhona unokukhetha kwizinto ezintathu ezahlukeneyo zokuyila: i-aluminium, i-carbon fiber okanye i-magnesium.
The I-AXA 360 POV 360 inkqubo Kusekelwe kwi-AXA 360 design. Le yunithi ibinzima kwaye inokwakha i-carbon fiber egxininisiweyo, ukuboniswa kweentloko ezihlangeneyo, umxhasi oxhaswe nge-light fiber carbon fiber neck and unit measure measurement for stabilization. Iinkqubo ze-AXA zenziwe yile I-Kurt Weijan Lin, i-Engine Engineer kwi-Radiant Images.
The Sense 9 Enye inkqubo yekhamera ye-360 ekwakhiwe kunye nomenzi we-movie engqondweni, leyunithi eyoyikekayo inika okulungileyo kwiklasi kokubili ukulungelelanisa nokuchaneka kwi-cinematic image ye-360 umfanekiso wokubanjwa! Uyilo lobutyebi luya kuba Ukufumana iikhamera ezinkulu, ezinje Canon I-C300 Mark II (ilungele ukukhangela okuphantsi / ukuphakanyiswa kwezinga eliphezulu), i-Alexa Mini, iFantom Flex, i-RED WEAPON nabanye. I-Xense ye-9 ibonisa zonke izixhobo eziza kusebenzisa i-cinematographer yendabuko, kuquka ne-code-code, i-stitch, i-system ehlangeneyo, ukujonga i-video kunye nokuvumelanisa.
Olunye oluninzi lweMifanekiso yeeFayili:
Mobius 2.0 Uhlaziyo lwe-Radiant's downbreaking Mobius POV yinyaniso ebonakalayo yintloko ekhankanywe ngentloko, eyayiyokuqala ukubeka umbukeli emzimbeni womlingisi ngenjongo entsha ebalulekileyo. Lo mzobo onobuncwane ubonakalisa i-carbon fiber entsha, i-design lightweight, inkqubo yombutho ohlangeneyo, umboniso weentloko kunye neenkqubo ezixhasayo ezivumela ukusebenzisa iintlobo zeekhamera.
OZO Live Isisombululo sesikhathi sokusasaza esikolweni esihlala kwii-360-degree esebenzisa i-Nokia OZO enamandla, eyenza abadali be-content bakwazi ukurekhoda lula kwaye basasaze iVR ngendawo kwindawo nganye, kuzo zonke izithambiso, ootitshala baya kuba neempendulo zokuphendula imibuzo Imiboniso yeefowuni zokubamba.
I-Radiant nayo inamanani amaninzi eekhamera ze-VR 360, iinkqubo kunye nezixhobo zokuxhasa ezithengiswayo Www.360radiant.com/.
Mayelana neeMifanekiso eziMnandi
Izithombe ezimnandi ziyi-award winning digital cinema innovator kunye nezindlu zokuqashisa ezinika izixazululo zokudala kwi-2D, i-3D, i-VR kunye neyona nyaniso, Iikhamera nezixhobo, kunye nenkxaso yokuxhaswa kwabaxhasi, kwi-industry picture motion motion. I-Radiant ine-wr ene-VR ezinikele ngaphakathi kwisebe layo kwi-2702 Media Centre Drive ngasentla-mpuma los Angeles. Ukufumana ulwazi oluninzi malunga neeMifanekiso eziMnandi, tyelela kwi-intanethi Www.radiantimages.com. Fumana iifoto ezimnandi kwi-Facebook, Instagram kunye ne-Twitter.
malunga NAB Bonisa:
NAB Bonisa, Eyayibanjwe ngo-Ephreli 22 - 27, i-2017 eLas Vegas, iyona ndibano enkulu kunazo zonke equka iMET Effect, ukuguqulwa kweendaba, ukuzizonwabisa kunye nobuchwepheshe. Ngabantu abangama-103,000 abavela kwii-166 kumazwe kunye ne-1,700 + NAB Bonisa Yindawo enkulu yemarike yezixazululo ezigqithiseleyo ukusasazwa kwendabuko kunye nokwamkela ukuhanjiswa kokuqukethwe kwizikrini ezintsha ngeendlela ezintsha. Kususela ekudalweni kuya kusetyenzisweni, kwiiplanga ezininzi kunye namazwe angenakubalwa, NAB Bonisa Apho ababonisi behlabathi babonisana khona ukuze bazise umxholo wokuphila kwiindlela ezintsha kunye nezolisayo.
Ukusasazwa kuBetha nguMsasazo oPhathelene ne-2017 NAB Bonisa E Las Vegas kunye noMvelisi we NAB Bonisa PHILA. Kwi 2016, NAB Bonisa I-LIVE ifunyenwe kuma-1.3 ababukeli be-intanethi kunye ne-2017 NAB Bonisa, Kulindeleke ukuba sidlule i-1.5 izigidi zezibukeli.
2016 NAB Bonisa I-2016 NAB Bonisa i-Job Fair 2016 NAB Bonisa iindaba Izabelo zokuBasa Umagazini we-Beat Broadcast Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli KwiNkomfa yabasasazo KwiNkomfa yoSasazo NAB 2015 NAB 2016 NAB Bonisa NAB Bonisa i-2016 Nab ubonisa imisebenzi NAB Bonisa i Las Vegas NAB Bonisa Ukubhaliswa NAB16 Nabshow Umbutho kaZwelonke woLwazi lwabasasazo Ihlabathi loPhuhliso lweZithuba	2017-05-15
Previous: I-New Brightcove Technologies Umngcipheli weMidlalo kubaThengi beMidiya Efuna ukuphucula amava oMsebenzisi, ukunciphisa iindleko, kunye nokwandisa imali
next: I-JVC yokuPhucula iPHD, i-4KCAM, i-PTZ iiKhamera zokuBambisana neMigangatho yeZiko leMidlalo yeNtsebenziswano yokuThuthukiswa komsebenzi.
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso kuwe: "#NABShow 2017: Umkhiqizi ukhangelelanisa: Iimifanekiso ezigqithisileyo ziphawula!". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/nabshow-2017-manufacturer-spotlight-radiant-images- impresses/. Enkosi.